एमाले अध्यक्ष ओलीले भने– खुला धाँधलीको सशक्त प्रतिबाद गर्दै निर्वाचनमा जाऔं (भिडियो) | NepalDainik
एमाले अध्यक्ष ओलीले भने– खुला धाँधलीको सशक्त प्रतिबाद गर्दै निर्वाचनमा जाऔं (भिडियो)
काठमाडौं, ३० बैशाख – बैशाख ३१ को निर्वाचनलाई दुई चरणमा गर्ने भन्दै एक महिनापछि जेठ ३१ मा दोश्रो चरण गर्ने भनियो । १ महिना पछि सार्ने काम भयो । पहिलो धाँधलीको प्रयास भयो । सरकारले गलत मनासयका साथ दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गर्यो । ३१ बैशाखमा प्रदेश ३, ४ र ६ मा निर्वाचन गर्ने भनियो । वाँकीमा दोश्रो चरणमा गर्ने निर्णय गर्यो । यो आफैंमा सरकारको स्वेच्छाचारी निर्णय हो, गलत नियत र मनसायबाट गरिएको छ ।
हामी, नेकपा एमाले लोकतन्त्रपछिका सबै निर्वाचनमा सक्रिय सहभागि छौं । यति सारो कहिले पनि भएको थिएन । सरकारले अहिले स्वेच्छाचारी ढंगबाट यी काम गरिरहेको छ । औचित्यका आधारमा होइन, स्वेच्छाचारी र मनोमानी ढंगबाट गरिएको छ । यसबीचमा मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुको रमजान पर्छ । जेठ १३ बाट शुरुभएर असार १३ सम्म एक महिना पर्छ । राज्य धर्मनिरपेक्ष भयो भनेका छौं । त्यसको अर्थ सबैको आस्था, धर्म र भावनामाथिको सम्मान हो । तर यहाँ त मुस्लिमलाई निषेध गरिएको छ । निर्मम र अपमानजनक ढंगले उनीहरुको भावनामाथि खेलबाड गरिएको छ । जुन रमजानमा दिनभरी केही नखाई, पानीसमेत नखाई बस्छन र रातमा मात्र खाना खान्छन, त्यसैको बीचमा पारेर निर्वाचन किन घोषणा गरियो ? एक समुदायको आस्था, धार्मिक पर्ब र चाडबाडमाथिको यो हमला हो । मैले सरकारलाई, प्रधानमन्त्रीलाई पटक पटक आग्रह गरँे, तर सरकारले सुनेन । १५ लाख अर्थात ५ प्रतिशत जनसंख्या भएको मुस्लिमप्रति उपेक्षा गर्न पाइदैन । उनीहरुले उम्मेद्वार हुने, प्रचारप्रसार गर्न पाउने कि नपाउने ? उनीहरुले उम्मेद्वार हुन पाउनुपर्छ, प्रचारप्रसार गर्न पाउनुपर्छ, मतदान गर्न पाउनुपर्छ ।
मैले प्रधानमन्त्रीसँग यो कुरा राख्दा जानुहोस कांग्रेसले मानेन, माओवादीले मानेन भनेर मुस्लिमहरुलाई भन्दिनुहोस भन्ने जबाफ आयो । त्यसो भनेर एमालेलाई भोट दिनुहोस पनि भन्नुहोस न भन्ने कुरा समेत गर्नुभयो । तर यो भोटको कुरा होइन । यो सबैको आस्था, भावनाप्रतिको सम्मानको बिषय हो । प्रधानमन्त्रीबाट, कांग्रेसका नेताबाट त्यस्तो जबाफ पाउँदा मलाई दुःख लाग्यो । सरकारको यो गैरजिम्मेबार कार्य हो । इस्लाम धर्मावलम्बीलाई मतदानको अधिकारबाट बंचित गरिदैछ । यो बिलकुल गलत छ ।
अर्को, सरकार एकलकाँटे, स्वेच्छाचारी ढंगबाट अघि बढेको छ । उहाँहरु निर्वाचनको मुखमा रकमान्तर गर्दै हुनुहुन्छ । बिभिन्न काम, ठेक्कापट्टाका लागि लाइसेन्स बाँड्दै हुनुहुन्छ । हामीले यो बिषय गम्भीर रुपमा उठायौं । उठाएपछि प्रतिपक्षले बिरोध गर्यो, मिडियाले बिरोध गर्यो भनेर अलिकति पछि हट्नुभयो । डिल त गरि सक्नुभयो तर लाइसेन्स पछि, निर्वाचन आचारसंहिता कटेपछि दिने सम्झौता गर्नुभएको छ ।
म सोध्न चाहान्छु, कांग्रेस र माओवादी के चाहान्छन ? देशलाई कता लैजान चाहान्छन ? यसरी नै लोकतन्त्र र सार्बभौमसत्ता बलियो हुन्छ ? राष्ट्र जोगाउन सकिन्छ ? मन्त्रीहरु मत खरिद गर्दै हिडेका छन् । यसरी नै लोकतन्त्र सुदृढ र बलियो हुन्छ ? माओवादीले एमाले कार्यकताको हत्या गरेको छ, घाइते बनाएको छ । अस्पतालहरुमा घाइते छन् । जिल्लामा घाइते छन्, काठमाडौंका अस्पतालमा घाइते छन् । घाइते भएर लडेका छन् । के यही हो आचासंहिताको पालना ? मन्त्रीहरु पैसा बाँड्न जाने, मत प्रभावित गर्न जाने, योजना बाँड्न जाने, यही हो आचारसंहिता ? मलाई आशंका छ, यो कसले गराएको छ ? जिम्मेवारी लिने कथित समुहहरुले हो कि वा अन्य कसैले ? यसमा कसकसको साठँगाठँ छ ? एमालेले बनाएका प्रचार सामाग्री ‘डिस्र्टोट’ गर्ने, त्यतिमात्र होइन, ‘डिस्र्टोट’ गरी अर्को बनाउने । दुनियाँमा यस्तो कहिँ हुदैन । अर्काको कला चोर्ने काम गर्ने ? आफ्नो कला केही छैन, बनाउने कला छैन, तोडमोड गर्ने कलामात्र छ ।
म निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्न चाहान्छु सरकारलाई उसले गरेका क्रियाकलाप गर्न मिल्दैन भन्न सक्नुपर्छ । निस्पक्ष भएर भन्न सक्नुपर्छ । निर्वाचन आयोग मुकदर्शक र निरिह भएर बस्न सक्दैन । म आयोगलाई प्रश्न गर्न चाहान्छु पहिलो चरणको निर्वाचन भोली हुँदैछ । सरकार के तमासा गरेर बसिरहेको छ । निर्वाचन नजित्ने भएपछि तोडमोड गर्ने काम हुँदा आयोग किन मौन ? एउटा निर्वाचन भोली हुँदैछ, यही बेला स्थानीय तह बिभाजन गर्ने, तोडफोड गर्ने काम भइरहेको छ । ११ वटा जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउने, आफू अनुकल बनाउने काम निर्लज्ज ढंगले हुँदैछ । यो धाँधली नभएर के हो ? पंचायतकालमा पनि यस्तो हुँदैनथ्यो । यो तमासा के गरेको ? निर्वाचन आयोगलाई सोध्न चाहान्छु यो तमासा हेरेर बस्न मिल्छ ? मतदाता साटफेर गर्ने, स्थानीय तह साटफेर गर्ने, त्यो पनि निर्वाचन शुरु हुँदै गर्दा ? भन्ने बेलामा मधेशी मोर्चा, अहिले राजपाले गर्दा गरेको भन्ने, मान्दै मानेन, उसलाई मनाउनलाई गरेको भन्ने जबाफ दिने । राजपाका राजनीतिक माग छन्, तीनमा छलफल गर्न सकिन्छ । निर्वाचनपछि तीनमा छलफल गर्न सकिन्छ । के राजपाले अदालतलाई पन्छाउ, न्यायधीशमाथि महाअभियोग लगाउ भनेको थियो ?
केही जिल्लामा निर्वाचन तह बढाउने, अन्यमा नबढाउने ? यो कस्तो लोकतन्त्र हो ? यो दादागिरी भयो । अहिले सिमा हेरफेर गर्ने । म निर्वाचन आयोगलाई सोध्न चाहान्छु हामीले दोश्रो चरणको निर्वाचनमा कति स्थानीय तहमा मतदान गर्न पाउने हो ? ७४४ वटा स्थानीय तहमा निर्वाचन गर्ने भनेकोमा पहिलो चरणमा २८२÷२८३ मा ठाउँमा गर्नेभएपछि बाँकीमा दोश्रो चरणमा मतदान गर्न पाउने कि नपाउने ? यस्तो हुँदा किन जिब्रो चपाउँछ निर्वाचन आयोग ? म सोध्न चाहान्छु कति ठाउँमा दोश्रो चरणमा निर्वाचन गराउँदै हुनुहुन्छ ? यो तमासा हो । यस्तो तमासा कसरी हुन्छ ? यसमा निर्वाचन आयोग बोल्नु पर्छ कि पर्दैन ?
सम्बोधनको भिडियो हेर्नुहोस्:
Posted by Becoming Kishor at 6:20 PM
No Comment to " एमाले अध्यक्ष ओलीले भने– खुला धाँधलीको सशक्त प्रतिबाद गर्दै निर्वाचनमा जाऔं (भिडियो) "